မဟာဝဂ္ဂ: The Great Section
သံယုတ္တ: ၄၅ ၊ ၄၆ ၊ ၄၇ ၊ ၄၈ ၊ ၄၉ ၊ ၅၀ ၊ ၅၁ ၊ ၅၂ ၊ ၅၃ ၊ ၅၄ ၊ ၅၅ ၊ ၅၆ ၊
၄၅. မဂ္ဂသံယုတ် – The Noble Eightfold Path
သန ၄၅.၁: အဝိဇ္ဇာသုတ် – Ignorance [Thanissaro] [Bodhi]
မှားသောအမြင် ရှိလျှင် မှားသောအတွေးရှိနိုင်သည်။ မှားသောအတွေး ရှိလျှင် မှားသောစကား ပြောမိနိုင်သည်။ မှားသောစကား ပြောလျှင် မှားသောလုပ်ရပ်များ လုပ်နိုင်သည်။ မှားသောလုပ်ရပ်များ လုပ်လျှင် မှားသောအသက်မွေးမှု မွေးမိနိုင်သည်။ မှားသောအသက်မွေးမှု ပြုလျှင် မှားသောအားထုတ်မှု ပြုနိုင်သည်။ မှားသောအားထုတ်မှု ပြုလျှင် မှားသောသတိရှိနိုင်သည်။ မှားသောသတိရှိလျှင် မှားသောတည်ကြည်မှု ဖြစ်နိုင်သည်။
သန ၄၅.၂: ဥပဍ္ဎသုတ် – Half (of the Holy Life) [Thanissaro] [Bodhi]
“မိတ်ဆွေကောင်း ရှိခြင်းသည် အကျင့်မြတ်၏ ထက်ဝက် ပြည့်စုံသည်”ဟု ပြောမိသော အရှင်အာနန္ဒာကို ဆုံးမသော အကြောင်းဖြစ်သည်။ အရိယာမဂ်ကို မည်သို့ ပွားများရမည်ကို ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၅.၈: ဝိဘင်္ဂသုတ် – An Analysis of the Path [Thanissaro] [Bodhi]
သန ၄၅.၁၅၉: အာဂန္တုကသုတ် – For All Comers [Walshe] [Bodhi]
သန ၄၅.၁၆၅: ဒုက္ခတာသုတ် – Suffering [Walshe] [Bodhi]
ဒုက္ခ ၃ မျိုးရှိကြောင်း ဟောထားပါသည်။
သန ၄၅.၁၇၂: သြဃသုတ် – Floods (1) [Thanissaro] [Bodhi]
သံသရာ လည်စေတတ်သော သြဃ ၄ မျိုးရှိကြောင်း ဟောထားပါသည်။
၄၆. ဗောဇ္ဈင်္ဂသံယုတ် – The Seven Factors for Awakening
သန ၄၆.၁: ဟိမဝန္တသုတ် – The Himalayas [Thanissaro] [Bodhi]
ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့သည် သီလကို အမှီပြု၍ ကျင့်ကြံပွားများရသည်ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၆.၆: ကုဏ္ဍလိယသုတ် – [Bodhi]
သန ၄၆.၁၄: ပဌမ ဂိလာနသုတ် – Ill [Piyadassi | Thanissaro] [Bodhi]
မြတ်စွာဘုရားက အပြင်းအထန် နေမကောင်းဖြစ်နေသော အရှင်မဟာကဿပကို ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတရားတော် ဟောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
သန ၄၆.၁၆: တတိယ ဂိလာနသုတ် – Ill [Piyadassi] [Bodhi]
အရှင်မဟာစုန္ဒက အပြင်းအထန် နေမကောင်းဖြစ်နေသော မြတ်စွာဘုရားကို ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတရားတော် ရွတ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
သန ၄၆.၅၁: အာဟာရသုတ် – Food [Thanissaro] [Bodhi]
သန ၄၆.၅၂: ပရိယာယသုတ် – [Bodhi]
သန ၄၆.၅၃: အဂ္ဂိသုတ် – Fire [Thanissaro | Walshe (excerpt)] [Bodhi]
သန ၄၆.၅၄: မေတ္တာသဟဂတသုတ် – Good Will/The Brahma-viharas [Thanissaro | Walshe (excerpt)] [Bodhi]
သာသနာပြင်ပရှိသူများ၏ မေတ္တာဘာဝနာနှင့် မြတ်စွာဘုရား၏ မေတ္တာဘာဝနာ မည်သို့ကွာခြားကြောင်း ဖော်ပြထားသော သုတ်ဖြစ်သည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ မေတ္တာဘာဝနာနည်းဖြင့် တတိယ အရူပဈာန် (အာကိဉ္စညာယတနဈာန်) ထိ ရောက်နိုင်ကြောင်း ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၆.၅၅: သင်္ဂါရဝသုတ် – Sangarava [Walshe] [Bodhi]
အချို့စာများကို မည်သို့ပင် အချိန်ပေး လေ့လာသော်လည်း မမှတ်မိနိုင် ဖြစ်တတ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
၄၇. သတိပဋ္ဌာနသံယုတ် – The Four Frames of Reference (Foundations of Mindfulness)
သန ၄၇.၆: သကုဏဂ္ဓိသုတ် – The Hawk [Thanissaro] [Bodhi]
မြတ်စွာဘုရားက အလွန်ပေါ်လွင်သော သိမ်းငှက်နှင့် ဗီလုံးငှက်ငယ် ပုံပြင်ဖြင့် ကျက်စားသင့်သောနေရာ၊ မကျက်စားသင့်သောနေရာတို့ အကြောင်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၇.၇: မက္ကဋသုတ် – The Foolish Monkey/The Monkey [Olendzki | Thanissaro] [Bodhi]
မြတ်စွာဘုရားက အလွန်ပေါ်လွင်သော မုဆိုးနှင့်မျောက် ပုံပြင်ဖြင့် ကျက်စားသင့်သောနေရာ မကျက်စားသင့်သောနေရာတို့ အကြောင်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၇.၈: သူဒသုတ် – The Cook [Thanissaro] [Bodhi]
သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး ကျင့်ကြံပုံကို စားဖိုမှူး ဥပမာဖြင့် ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၇.၁၀: ဘိက္ခုနုပဿယသုတ် – Directed and Undirected Meditation/Mindfulness [Olendzki | Walshe (excerpt)] [Bodhi]
“သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်၌ မြတ်စွာဘုရားထက် ပိုမိုလွန်ကဲစွာ သိသော မြတ်စွာဘုရားမှ အခြားတစ်ပါးသော သမဏသည် လည်းကောင်း၊ ဗြာဟ္မဏသည် လည်းကောင်း ဖြစ်လည်း မဖြစ်ဖူး၊ ဖြစ်လိမ့်မည်လည်း မဟုတ်၊ ယခုအခါ၌လည်း မရှိပါဟု မြတ်စွာဘုရား၌ တပည့်တော် ဤသို့ ယုံကြည်ပါ၏”ဟု အဘယ်အကြောင်းကြောင့် အရှင်သာရိပုတြာ လျောက်ထားသနည်း
သန ၄၇.၁၃: စုန္ဒသုတ် – About Cunda [Nyanaponika | Thanissaro] [Bodhi]
အရှင်သာရိပုတြာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့် အကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
သန ၄၇.၁၄: ဥက္ကစေလသုတ် – At Ukkacela [Nyanaponika] [Bodhi]
အရှင်သာရိပုတြာနှင့် အရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်တို့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက် မြတ်စွာဘုရားက ရဟန်းအပေါင်းကို ဟောကြားသော သုတ်ဖြစ်သည်။
သန ၄၇.၁၉: သေဒကသုတ် – The Bamboo Acrobat/At Sedaka [Olendzki | Thanissaro] [Bodhi]
တရားကျင့်ခြင်းသည် အတ္တကြီးစွာ မိမိအကျိုးအတွက်သက်သက် မဟုတ်။ “မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် သူတစ်ပါးကို စောင့်ရှောက်ရာရောက်သည်။ သူတစ်ပါးကို စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ရာရောက်သည်။”ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၇.၂၀: ဇနပဒကလျာဏီသုတ် – At Sedaka [Thanissaro] [Bodhi]
သီဆို ကခုန်နေသော အလှမယ်နှင့် အားပေးအော်ဟစ်နေသော လူအုပ်ကြားတွင် အနားထိပြည့်နေသော ဆီခွက်ကို မဖိတ်အောင် ယူဆောင်သွားသကဲ့သို့ ကာယဂတာသတိကို ကျင့်ရမည်ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၇.၃၅: သတိသုတ် – Mindful [Thanissaro] [Bodhi]
သန ၄၇.၃၇: ဆန္ဒသုတ် – Desire [Thanissaro] [Bodhi]
သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး ကျင့်ကြံလျှင် လိုခြင်မှု ဆန္ဒကင်းပျောက်၍ နိဗ္ဗာန် ရောက်နိုင်သည်။
သန ၄၇.၃၈: ပရိညာတသုတ် – Comprehension [Thanissaro][Bodhi]
သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး ကျင့်ကြံလျှင် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ စိတ် နှင့် သဘောတရားတို့ကို ပိုင်းခြားသိ၍ နိဗ္ဗာန် ရောက်နိုင်သည်။
သန ၄၇.၄၀: ဝိဘင်္ဂသုတ် – Analysis of the Frames of Reference [Thanissaro] [Bodhi]
သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး ကျင့်ကြံရမည်ကို အတိုချုပ် ဟောထားပါသည်။
သန ၄၇.၄၁: အမတသုတ် – Deathless [Thanissaro] [Bodhi]
နိဗ္ဗာန်ရရှိရန် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး ကျင့်ကြံဖို့ တိုက်တွန်းထားသော သုတ်ဖြစ်သည်။
သန ၄၇.၄၂: သမုဒယသုတ် – Origination [Thanissaro] [Bodhi]
သန ၄၇.၄၆: ပါတိမောက္ခသံဝရသုတ် – Obligation [Walshe] [Bodhi]
ရဟန်းသိက္ခာပုဒ်တို့ကို သေချာစွာ စောင့်ထိန်း၍ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး ကျင့်ကြံရန် ဆုံးမသော အကြောင်းဖြစ်သည်။
၄၈. ဣန္ဒြိယသံယုတ် – The Five Mental Faculties
သန ၄၈.၁၀: ဒုတိယ ဝိဘင်္ဂသုတ် – Analysis of the Mental Faculties [Thanissaro]
ဣနြေ္ဒ ၅ မျိုးတို့အကြောင်းကို အတိုချုပ် ဟောထားပါသည်။
သန ၄၈.၃၈: တတိယ ဝိဘင်္ဂသုတ် – An Analysis [Thanissaro]
ဝေဒနာ ၅ မျိုးတို့နှင့် တွဲ၍ ဖြစ်သော ဣနြေ္ဒ ၅ မျိုးတို့အကြောင်းကို ဟောထားပါသည်။
သန ၄၈.၃၉: ကဋ္ဌောပမသုတ် – The Fire-stick [Thanissaro]
ဝေဒနာ ၅ မျိုးတို့နှင့် တွဲ၍ ဖြစ်သော ဣနြေ္ဒ ၅ မျိုးတို့၏ ဖြစ်ခြင်းနှင့် ချုပ်ခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းကို ဟောထားပါသည်။
သန ၄၈.၄၁: ဧရာဓမ္မသုတ် – Old Age [Thanissaro]
သက်တော်ကြီးရင့်လာသော မြတ်စွာဘုရားက အိုခြင်းတရားကို မြင်ပုံအား ဖော်ပြထားပါသည်။
သန ၄၈.၄၂: ဥဏ္ဏာဘဗြာဟ္မဏသုတ် – The Brahman Unnabha [Walshe]
ဣနြေ္ဒ ၅ မျိုးနှင့် စိတ်ဆက်စပ်ပုံ အကြောင်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၈.၄၄: ပုဗ္ဗကောဋ္ဌကသုတ် – Eastern Gatehouse [Thanissaro] မြတ်စွာဘုရားနှင့် အရှင်သာရိပုတြာတို့ သဒ္ဓိနြေ္ဒ (ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါ) အကြောင်းကို ဆွေးနွေးသော သုတ်ဖြစ်သည်။
သန ၄၈.၅၃: သေခသုတ် – The Learner [Thanissaro]
မိမိကိုယ်ကို ရဟန္တာ ဟုတ်မဟုတ် ဆန်းစစ်နည်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၈.၅၄: ပဒသုတ် – In the Foot [Walshe]
ပညိနြေ္ဒအစုကို ဆင်ခြေရာ ဥပမာဖြင့် ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၄၈.၅၆: ပတိဋ္ဌိတသုတ် – Established [Thanissaro]
မမေ့မလျော့မှုသည် ဣနြေ္ဒငါးပါးတို့ကို ပွါးများရန် လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။
၄၉. သမ္မပ္ပဓာနသံယုတ် – The Four Right Exertions
၅၀. ဗလသံယုတ် – The Five Strengths
၅၁. ဣဒ္ဓိပါဒသံယုတ် – The Four Bases of Power
သန ၅၁.၁၅: ဥဏ္ဏာဘဗြာဟ္မဏသုတ် – To Unnabha the Brahman [Thanissaro]
အရှင်အာနန္ဒာက “တရားတော်၏ နောက်ဆုံးရလဒ်သည် ဆန္ဒကို ပယ်ရန်ဖြစ်သည်”ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၅၁.၂၀: ဝိဘင်္ဂသုတ် – Analysis of the Bases of Power [Thanissaro]
မြတ်စွာဘုရားက ဣဒ္ဓိပါဒ် လေးပါး ပွါးများနည်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
၅၂. အနုရုဒ္ဓသံယုတ် – Ven. Anuruddha
သန ၅၂.၁၀: ဗာဠ္စဂိလာနသုတ် – Illness [Thanissaro]
အရှင်အနုရုဒ္ဓါက နေမကောင်းဖြစ်၍ ကိုယ်နာကျဉ်မှုကို မည်သို့ရင်ဆိုင်ပုံကို ဟောကြားထားပါသည်။
၅၃. ဈာနသံယုတ် – Jhana (mental absorption)
၅၄. အာနာပါနသံယုတ် – Mindfulness of breathing
သန ၅၄.၆: အရိဋ္ဌသုတ် – To Arittha [Thanissaro]
အာနာပါနဿတိ မည်သို့ကျင့်ရမည်ကို ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၅၄.၈: ပဒီပေါပမသုတ် – The Lamp [Thanissaro]
အာနာပါနဿတိဖြင့် ရူပ၊ အရူပဈာန်များကို ဝင်စား၍ အကျိုးများပုံများကို ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၅၄.၉: ဝေသာလီသုတ် – At Vesali [Thanissaro]
အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းကို ကျင့်ကြံပြီး ရဟန်းများ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေကြသောကြောင့် အာနာပါနဿတိကို ပြောင်းလဲ ဟောကြားရကြောင်းကို တွေ့ရပါမည်။
သန ၅၄.၁၃: ပဌမ အာနန္ဒသုတ် – To Ananda [Thanissaro]
အာနာပါနဿတိကမ္မဋ္ဌာန်းဖြင့် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးနှင့် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေကာ နိဗ္ဗာန်ရပုံကို ဟောကြားထားပါသည်။
၅၅. သောတာပတ္တိသံယုတ် – Stream-entry
သန ၅၅.၁: စက္ကဝတ္တိရာဇသုတ် – The Emperor [Thanissaro]
စကြဝတေးမင်းအဖြစ်ထက် သောတာပန်အဖြစ်က ပို၍မြတ်သည်။
သန ၅၅.၂၁: ပဌမ မဟာနာမသုတ် – To Mahanama (1) [Thanissaro]
သောတာပန်တည်လျှင် မတော်တဆ ဆိုးရွားသော သေဘေးတွေ့သော်လည်း ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာဘဝသို့ မရောက်နိုင်။
သန ၅၅.၂၂: ဒုတိယ မဟာနာမသုတ် – To Mahanama (2) [Thanissaro]
သန ၅၅.၂၄: ပဌမ သရဏာနိသက္ကသုတ် – Sarakaani (Who Took to Drink) [Walshe]
အရက်သောက်၍ သီလမမြဲသော သရဏာနိသာကီဝင်သည် သေခါနီး၌ အကျင့် သိက္ခောကို ဆောက်တည်သောကြောင့် သောတာပန်တည်သွားသော အကြောင်းဖြစ်သည်။
သန ၅၅.၃၀: နန္ဒကလိစ္ဆဝိသုတ် – To the Licchavi [Thanissaro]
သောတာပန်တို့၏ အင်္ဂါလေးပါးကို ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၅၅.၃၁: ပဌမ ပုညာဘိသန္ဒသုတ် – Bonanzas (1) [Thanissaro]
သောတာပန်တို့၏ အခြားသော အင်္ဂါလေးပါးကို ထပ်မံဟောကြားထားပါသည်။
သန ၅၅.၃၂: ဒုတိယ ပုညာဘိသန္ဒသုတ် – Bonanzas (2) [Thanissaro]
သန ၅၅.၃၃: တတိယ ပုညာဘိသန္ဒသုတ် – Bonanzas (3) [Thanissaro]
သန ၅၅.၄၀: နန္ဒိယသက္ကသုတ် – To Nandiya [Thanissaro]
သောတာပန်ဖြစ်ပြီး၍ ဆက်လက် ကျင့်ကြံအားမထုတ်လျှင် မေ့မေ့လျော့လျော့နေသူဟု ခေါ်သည်။
သန ၅၅.၅၄: ဂိလာနသုတ် – Ill [Thanissaro]
၅၆. သစ္စသံယုတ် – The Four Noble Truths
သန ၅၆.၉: ဝိဂ္ဂါဟိကကထာသုတ် – Wordy Warfare [Walshe] [Bodhi]
“သင်သည် တရားကိုနားမလည်၊ သင့်တရားထိုင်နည်းသည် မမှန်၊ အစဉ်လိုက် ပြောသင့်သည်ကို မသိ၊ ငါထောက်ပြသော အမှားကြောင့် သင်အရေးနိမ့်ပြီ”…. စသည်ဖြင့် စကားများကို ပြောမည့်အစား သစ္စာလေးပါးတရားကိုသာ ဆွေးနွေးရန် ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၅၆.၁၁: ဓမ္မစက္ကပ္ပဝတ္တနသုတ် – The Discourse on the Setting in Motion of the Wheel (of Vision) of the Basic Pattern: the Four True Realities for the Spiritually Ennobled Ones/Setting Rolling the Wheel of Truth/Setting in Motion the Wheel of Truth/Setting the Wheel of Dhamma in Motion [Harvey | Ñanamoli | Piyadassi | Thanissaro] [Bodhi]
သန ၅၆.၂၀: တထသုတ် – Real [Thanissaro] [Bodhi]
သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်းနားလည်အောင် ကျင့်ကြံကြရန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။
သန ၅၆.၂၂: ဒုတိယ ကောဋိဂါမသုတ် – Knowledge [Walshe (excerpt)] [Bodhi]
“သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်းနားမလည်ပါက သမဏ၊ဗြာဟ္မဏဖြစ်ရခြင်း၏ အကျိုးကိုလည်း မခံစားရ၊ သမဏဗြာဟ္မဏဟူ၍လည်း မခေါ်ဆိုထိုက်”ဟု ဟောထားပါသည်။
သန ၅၆.၃၁: သီသပါဝနသုတ် – The Simsapa Leaves } [Thanissaro | Walshe] [Bodhi]
မြတ်စွာဘုရားသည် သိထားသော တရားအားလုံးကို မဟော၊ အနည်းငယ်ကိုသာ ဟောသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
သန ၅၆.၃၅: သတ္တိသတသုတ် – One Hundred Spears [Thanissaro] [Bodhi]
“တစ်နေ့လှံအချက် သုံးရာဖြင့် အနှစ်တစ်ရာထိုးခံရ၍ သစ္စာတရားလေးပါးကို သိမည်ဆိုပါက တန်သေးသည်”ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၅၆.၃၆: ပါဏသုတ် – Animals [Thanissaro] [Bodhi]
လွတ်မြောက်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သစ္စာတရားလေးပါးကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသည်ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၅၆.၄၂: ပပါတသုတ် – The Drop-off [Thanissaro] [Bodhi]
သစ္စာတရားလေးပါးကို မသိသောသူတို့သည် “ဇာတိ၊ဇရာ၊မရဏတို့ကို ဖြစ်စေတတ်သော ပြုစီရင်မှု “သင်္ခါရ”တို့ကို မွေ့လျော်ကြ၍ ဆင်းရဲအပေါင်းတို့မှ မလွတ်ကြ”ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
သန ၅၆.၄၄: ကူဋာဂါရသုတ် – Gabled [Thanissaro] [Bodhi]
သစ္စာတရားလေးပါးကို မသိဘဲ ဆင်းရဲအဆုံးကို မပြုနိုင်၊ အိမ်ကို အောက်ခြေမှစ၍ စတင်ဆောက်ရသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။
သန ၅၆.၄၅: ဝါလသုတ် – The Horsehair [Thanissaro] [Bodhi]
သစ္စာတရားလေးပါးကို ထိုးထွင်းသိဖို့ အားထုတ်ရန် အရှင်အာနန္ဒာကို ဆုံးမသော သုတ်ဖြစ်ပါသည်။
သန ၅၆.၄၆: အန္ဓကာရသုတ် – Darkness [Thanissaro] [Bodhi]
သန ၅၆.၄၈: ဒုတိယ ဆိဂ္ဂဠယုဂသုတ် – The Hole [Thanissaro] [Bodhi]
လိပ်ကန်းဥပမာဖြင့် အလွန်ရခဲလှသော လူဘဝကိုရခိုက် သစ္စာတရားလေးပါးကို ထိုးဖောက်အားထုတ်ကြရန် ဟောကြားထားသော သုတ်ဖြစ်ပါသည်။
သန ၅၆.၁၀၂: မနုဿစုတိ နိရယသုတ် – Dust [Thanissaro] [Bodhi]
လက်သည်းဖျားပေါ်မှ မြေမှုန့်ဥပမာဖြင့် အလွန်ရခဲလှသော လူ့ဘဝအကြောင်းကို ဟောကြားထားသော သုတ်ဖြစ်ပါသည်။
သန ၅၆.၁၁၃: ဒေဝမနုဿနိရယသုတ် – [Bodhi]
“လူ့ဘဝ၊ နတ်ဘဝမှ သေဆုံး၍ လူ့ဘဝပြန်ရရှိရန် အလွန်ခက်ခဲလှသည်”ဟု ဟောကြားထားပါသည်။